यी हुन् परीक्षामा पास गराइदिने लालच दिएर यौनसम्बन्ध राख्न लगाउने शिक्षिका ! « Janaboli
यी हुन् परीक्षामा पास गराइदिने लालच दिएर यौनसम्बन्ध राख्न लगाउने शिक्षिका !
काठमाडौं । के हुन्छ जब शिक्षक वा शिक्षिकाले विद्यार्थीलाई परीक्षामा पास हुनको लागि आफुसाग यौनसम्बन्ध राख्न अनुरोध गर्छन ? यस्तै, सनसनीपुर्ण काण्ड बजारमा आएको छ ।
यस घटनामा संलग्न महिला कलेजकी प्राध्यापकलाई मद्रास उच्च अदालतले पक्राउ गरेको ११ महिना पछि उनीलाई सशर्त जमानत दिएको छ । न्यायाधीश एन किरुबाकरण र मदुरै पीठका एसएस सुन्दरले निलम्बित सहायक प्राध्यापक निर्मला देवीलाई जमानत दिएका हुन् ।
विद्यार्थीसँग प्राध्यापकको कुराकानीको अडियो भाइरल भए पछि कलेज र महिला फोरमको गुनासोमा उनका विरुद्ध कारबाही गरियो । अडियो क्लिपमा, प्रोफेसरले कथित रूपमा विद्यार्थीहरूलाई केही अधिकारीहरूसँग यौनसम्बन्ध राख्न सल्लाह दिइरहेका सुन्न सकिन्छ ।
देवीको सोधपुछको आधारमा प्रहरीले सहायक प्राध्यापक भि मुरुगन र अनुसन्धानका विद्यार्थी करुप्पसमीलाई पनि यस मुद्धामा संलग्न भएको आरोपमा गिरफ्तार गरेको छ । उच्च अदालतले निवेदन अस्वीकार गरेपछि दुबैलाई सर्वोच्च अदालतले जमानत दिएको हो ।
गत वर्ष सीबी–सीआईडीले २०० पृष्ठको आरोपपत्र अदालतमा दायर गर्यो । यसभन्दा पहिले, १६०० पृष्ठको प्रि–चार्जशीट जुलाई महिनामा फाइल गरिएको थियो । एनडीटिभी